Agbalịrị m Kubuntu 15.04 Beta2 na m na-ahapụrụ gị echiche m;) | Site na Linux
Agbalịrị m Kubuntu 15.04 Beta2 na m na-ahapụ echiche m;)
Abọchị ole na ole gara aga, Beta 2 nke ihe ga - abụ ** Kubuntu 15.04 ** pụtara ma hapụ ezigbo uto n'ọnụ m mgbe nkeji ole na ole nwalere. Ka anyị leba anya n’ihe ụfọdụ na-adọrọ mmasị ga-abịarute na Beta a.
1 Ike nke KDE
2 Ihe omuma ndi ozo banyere Kubuntu 15.04
3 Nkwenye Kubuntu 15.04
Ike nke KDE
Ikekwe mgbanwe kachasị mkpa nke ** Kubuntu 15.04 ** na-ewetara anyị bụ na ha debere nchebe na nkwụsi ike nke KDE 4.X iji meghee aka ha na ** Plasma 5 **. Anaghị m echeta ụdị nke Kubuntu jiri KDE 4.0 bịa na nke mbụ ya, mana ihe m na-agaghị echezọ bụ na ọ bụ ọdachi zuru oke n'ihi enweghị ike desktọọpụ n'oge ahụ.
Na ** Plasma 5 **, ọ bụ ezie na anyị na-achọkarị ihe yiri nke ahụ, echeghị m na ọ dị ka oge ahụ. Ndi anyi na-anwale ** Plasma 5 ** kemgbe o bidoro ya ahula etu o jiri tozuo obere obere na nkowa nke ka efu n'ezie pere mpe. Ikekwe nke kacha wee iwe bụ na ụfọdụ ngwa, dị ka Pidgin, egosighi akara ngosi na sistemụ sistemụ. Mana n’enweghị obi abụọ ụfọdụ uru na ndozi nke ** Plasma 5 ** ga-ewetara anyị na ** Kubuntu 15.04 ** ga-eme ka anyị chefuo ihe ndị ahụ.
Ebe ọ bụ na anyị rutere na ngebichi * nbanye, anyị nwere ike ịhụ nlekọta mara mma nke ndị mmepe KDE nwere ekele maka ndị otu ọhụrụ * Na-ahụ maka onyonyo na nhazi nke Desktọpụ Environment. Otu ọdịdị ahụ anyị hụrụ na ihuenyo mkpọchi:
Mgbe ị na-abanye na Desktọpụ echere m na ihe mbụ anyị ga-achọpụta bụ otu "minimalist" ọ bụ, na enweghị obi abụọ ọ mara mma, ọ bụ ezie na agba masịrị ya. Ihe omuma atu nke a bu KDE Ngwa menu, nke di nma, mara nma ma di nma *.
Maka ndị na-ahọrọ isiokwu gbara ọchịchịrị na Plasma, n'ihi na * Breeze * (isiokwu ọhụrụ maka Desktọpụ), na-enyekwa anyị ụdị * Ọchịchịrị *:
Nkọwa ọzọ masịrị m maka * Live CD * nke Beta a bụ na ha etinyela ngwa GTK dị mkpa, na nke a ** LibreOffice ** na ** Mozilla Firefox **. Tụkwasị na nke ahụ, akara ngosi ndabara bụ ** Oxygen Font **, a font mere kpọmkwem maka KDE, ọ bụ ezie na ọ naghị eme ka m kwenye na ndabara nke usoro ahụ * mgbochi aliasing *, na m na-emecha tinye ọzọ. Ha tinyekwara na KDE Mmasị Center, nhọrọ iji hụ data nke otu anyị:
Laghachi na ** Plasma 5 ** na akwụkwọ ọhụụ ya, ugbu a * applet * so na ngalaba iji chịkwaa ndị egwu egwu:
Na nke ** Kubuntu 15.04 **, a na-agbakwunye * applet * ọzọ iji wepụta KDE Telepathy nke bara ezigbo uru:
N'aka nke ọzọ, na ** Plasma 5 ** ha ewerela (n'uche nke m) ụkwụ azụ site na itinye akwụkwọ ozi na-ese n'elu mmiri n'ụdị afụ, nke anaghị ahazi ma ọlị. Ndị a ozugbo ha kwụsịrị nwere ike ịlele na panel dị ka ọ dị na mbụ.
M na-ekwu na ọ bụ nzọụkwụ azụ n'ihi na KDE4, ị nwere ike * wepụ * ọkwa sitere na ngalaba ma nye ha otu ụdị (na afụ), mana anyị nwere nhọrọ ịme ya ma ọ bụ ịghara ime ya. Kedu ụzọ ọ bụla, ha dị ezigbo mma.
Ihe omuma ndi ozo banyere Kubuntu 15.04
Ule nke * LiveCD * ahụrụ m ụfọdụ nkọwa ndị ọzọ masịrị m, dịka ** Kubuntu gụnyere GTK Okwu ọhụrụ akpọrọ Orion ** nwere ụdị ya maka ngwa GTK2 na GKT3. Ọzọkwa, ọ na-agbakwụnye ụdị eserese ọhụụ maka KDE akpọrọ * Fusion *.
Ihe ọzọ dọọrọ uche m bụ na mgbe m na-ede ihe na ** Kate **, m wee pụọ. Mgbe m laghachiri, m meghere ** Kate ** ọzọ gbara arụkwaghịm na m weere ọtụtụ ndetu ma echebeghị m, mana ahụrụ m nke a:
Ọ bụghị naanị na ọ kwere ka m hụ mgbanwe tupu / mgbe emechara, mana o kwere ka m cheta ihe m dere, ma ọ bụ echefu m. Kedu ihe ị chere? Ọ bụrụ na nke a bụrịrị ebe ahụ, naanị m nwere ya maka nri ụtụtụ 😉
Dịka ị pụrụ ịhụ na nseta ihuenyo ahụ, n'etiti ihe edeturu m na-atụ aka dị ka * ihe na-adịghị mma na beta a, bụ na LibreOffice chọrọ obere mmetụta ịhụnanya ebe ọ bụ na njikọta na KDE adịghị njọ, mana na menu anyị amaghị mgbe anyị kwụsịrị na ụfọdụ nhọrọ.
Na iji mechaa akụkụ a, ekwesịrị m ịnakwere nkọwa ụfọdụ ndị a ga-enwe ekele maka ha. Nke mbụ, na agbanyeghị na ọtụtụ nkesa ndị ọzọ agbanweela akara ugwu nke ngwaọrụ ahụ na * / run / media / user / device / *, Kubuntu na-eme ka ebe a dị na * / mgbasa ozi / onye ọrụ / ngwaọrụ / *. Ihe ọzọ gbakwunyere bụ na ọ gụnyere KDE Jikọọ iji soro sistemụ anyị na-emekọrịta site na ekwentị gam akporo.
Nkwenye Kubuntu 15.04
N'agbanyeghị oge ule dị mkpirikpi, echere m na ** Kubuntu 15.04 ** dị njikere na njikere ịnata ** Plasma 5 **. Mgbe KaOS gasịrị, ugbu a Kubuntu 15.04 ga-abụ nkesa ọzọ * pro Plasma5 * nke m ga-akwado enyi ọ bụla. Maka ugbu a, m ga-echere nsụgharị ikpeazụ iji nwalee ọzọ ma gosipụta ma ọ bụrụ na m ziri ezi n'echiche m.
Agbanyeghị, ihe kachasị mma ị nwere ike ime bụ ịnwale ya n'onwe gị, yabụ ana m ahapụrụ gị njikọ iji budata ya:
Budata Kubuntu 15.04 Beta 2
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Agbalịrị m Kubuntu 15.04 Beta2 na m na-ahapụ echiche m;)
Ihe 55 kwuru, hapụ nke gị
Na-akpali. Anyị ga-ahụ n'April mgbe mbipute kwụsiri ike ga-apụta.
PS: 15.04 bụ LTS? Echere m na ọ bụ ụzọ abụọ, 14.04, 16.04, wdg ...
Zaghachi Obi-Wan Kenobi
Ọ bụghị m hụrụ n'anya.
Di na nwunye, ma na XX.04.
Ndo. Nkọwa nke m.
A obere mgbazi ma ọ bụrụ na ị chọrọ:
«N'agbanyeghị oge ule dị mkpirikpi, ekwenyere m na Kubuntu 15.04 dị njikere ma kwadebe ịnata Plasma 5. Beingbụ onye a tọhapụrụ LTS anyị ga-enwerịrị patches ma ọ bụ nchedo na nkwụsi ike nrụzi hụrụ, mana n'onwe ya ụdị KDE a nwere ike zuru oke."
N'ihe m maara, ọ dabaghị na ntọhapụ LTS. LTS na-apụta kwa afọ abụọ ọ bụla, nke ugbu a bụ 2 LTS, nke na-esote ga-abụ 14.04 LTS. https://wiki.ubuntu.com/LTS
Ugbu a, gbasara ule ahụ: eziokwu bụ na distro na-adọrọ mmasị, enwere m mmasị n'ozuzu ọ na-enweta. Anyị ga-anwale ya 🙂
Zaghachi ka gorlok
Oh right .. Enwetara m echiche ahụ na .04s niile bụ LTS: D. Daalụ maka mgbazi ahụ, ugbu a, m mezie ya.
Achọrọ m ịnwale nke ikpeazụ, mgbe m nwara ịnwale beta a na laptọọpụ m ma ọ bụrụ na m kwaga windo ha malitere ịla n'iyi ma ọ bụ nwuo anya ma ọ bụ mechie, na-ewe iwe n'ezie, enwere m olileanya na nke ikpeazụ ga-aba uru maka m, m ga-anwale ya Eprel.
Kedụ kaadị vidiyo nke laptọọpụ gị nwere?
Laptọọpụ nke m na-anwale ndị nkesa nwere AMD Radeon 7310 HD, n'oge ọ dị na Antergos na gnome na-agagharị nke ọma.
Nke ahụ mere m na 14.10 na plasma 5 ... M meziri ya site na ị rụọ ọrụ ọkwọ ụgbọ ala AMD. Ugbu a na 15.04 achọghịzi m ya.
Enwere m olileanya na ọ ga-enyere gị aka.
Onwe m, echere m na ụdị a, ọ bụ ezie na ọ ka bụ beta, bụ nke rụrụ ọrụ kacha mma na laptọọpụ m dị ugbu a (yana emelitere site na 14.10). Ọsọ, mara mma, kwụsie ike ... eziokwu ... ọ masịrị m nke ukwuu. Enwere m naanị nsogbu ole na ole na ngwa ndị ewepụrụ ọkara, yana kmix nke ga - eme na mbido sistemụ. Dòziri nke ahụ, ihe niile zuru oke! na nkwado asụsụ, ọ bụ ihe kacha gbaghara m na 14.10 alpha Plasma 5.
Ndewo .. na nde dollar dollar Kedu ka m ga esi eme Compiz Fusion oru?
Compiz Fusion na KDE? Nke ahụ adịghị mkpa .. 😉
Ọ bụ na ọ baghị uru n ’ihi na ọ bụ KWin? Ọ bụ na ọ dịghị mkpa n’ihi na Compiz adịlarị mgbe ochie? Ọ bụghị na ọ dị mkpa n'ihi na Compiz anaghị enyere aka nrụpụta? ...
Ajụjụ na ezi ebumnobi, m dokwuo anya 🙂.
Zaghachi Chicxulub Kukulkan
Compiz cube mara mma karịa kwin's 🙂
izu ohi dijo
Ọfọn, Plasma 5 anaghị amasị m, agbalịrị m ya na Kaos, Manjaro, Kubuntu na Arch ma ọ naghị eme ka m kwenye. Isi mmalite ya adịghị mma, ọ na-eripịa m karịa Kde4, ọ na-akụ ọtụtụ oge, ọ na-amalite site na sddm dịka nwayọ nwayọ dịka nke Kdm yana n'ozuzu ya ọ dị ka Kde 4 facelift karịa ihe ọ bụla ọzọ. Ọ bụrụ na Kde 4 kwụsie ike, nwee ntụkwasị obi ma nwee ntụkwasị obi, gịnị kpatara na ị gaghị eme ihu ihu na akara ngosi ọhụụ, isiokwu ọhụụ ma melite ngwa ndị emetụbeghị ogologo oge dị ka Amarok ma ọ bụ Konqueror, wdg?
Gaa zuo ohi
Plasma 5 na-agafe karịrị ihu ihu .. 😉
Ọfọn, ị nwere nsogbu ndị ahụ tupu mmelite ikpeazụ nke plasma 5.2.2, bụ nke edoziworo n'oge na-adịbeghị anya, ọ naghịzi akpọchi ma na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụghị ebuli ihu ebe ọ bụ qt5, ebule ebule bụ otu ihe ahụ dị ka desktọọpụ plasma 4 ihe dịka 400 megabytes. Amarok? ma ọ bụrụ na o nweghị ihe jikọrọ ya na desktọọpụ. o_O
Zuru oke na ha edozila ha mana m ga-echere ma ọ dịkarịa ala ruo oge ọkọchị iji ya, n'uche m ọ ka dị oke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọ na-echetara m Gnome 3 mgbe ọ pụtara, juputara na chinchi.
Amarok m kwuru n'ihi na agbahapụla ụfọdụ ngwa Kde ogologo oge, echere m na ekwesịrị itinye ha na ngwa ndị a karịa na desktọọpụ.
Ọ bụrụ na KDE 4 na-egbu maramara, ọ ga-abụ ihe obi ụtọ ịkwụsị iji ya, nri? ọ dịkarịa ala ruo oge ụfọdụ.
Kedu oge KDE 4 na-akwado?
Ejila m KDE ogologo oge mana eziokwu bụ na ha enyela ya ezigbo ihu ihu na ọkwa mma. N'uche m, ọ nwetala ọtụtụ isi ihe na nke a, ọ na-adị ntakịrị oge.
Zaghachi Chuck Daniels
Kemgbe 2012 mgbe m gbanwere site na Gnome na / ma ọ bụ nkwekọrịta (cinammon) gaa Xfce, enwere m ezigbo ntụsara ahụ na gburugburu ebe a (ọkachasị na ụdị ọhụrụ 4.12 nke zutere ihe niile m tụrụ anya ya) mana ha na-ekwu ọtụtụ ihe banyere KDE na ọ bụ ugbua na-enye m dika ịchọrọ ịnwale ya naanị iji wepụ ọchịchọ m.
Zaghachi Adolfo Rojas G
Naanị ihe na-egbochi m ịga Linux bụ nsogbu batrị na Windows na-ewe m ihe dị ka awa 3 na Linux na-atụ anya mgbe ọtụtụ ndozi 1 hour na ọkara = /
Achọpụtawo m arụmọrụ magburu onwe ya na Ubuntu Gnome.
Zaghachi Ugo Yak
acha ọkụ, ada ada, m na-ekwu maka "Ubuntu MATE" ^^ (anwalebeghị m Gnome).
Kwesịrị ịwụnye TLP iji belata oriri .... jiri PPA ma na jiffy ị rụnyere ya. Ọ bụghị ọrụ ebube, mana ọ na-achịkwa ibelata oriri n'etiti 10 na 20%.
My batrị dịruru 6 awa.
Kwalite ya site na isoro usoro ndị a:
Ọ dị m ka m ga-ahapụ gnome wee gaa kde, enwere ụfọdụ ndepụta mmemme nke ọ nwere na ndabara
Achọghị m ịma na nke a bụ onye ọrụ mbụ KDE 5 mmejuputa iwu na kubutu, mana amaghị m ma ọ bara uru ịhapụ LTS. M ga-echere nyocha mbụ na ihe na-erughị ọnwa 1, m gbalịrị ya na igwe arụmọrụ ma ọ na-erikwu ebule na elu nke Gnome ihe ruru 600mb mana ọ na-aga nke ọma.
OFFTOPIC: Onwere onye ma maka igwe egwu ọ bụla na-adịghị asọ dịka amarok / clementine na KDE? Anwụrụ na-amasị m mana ọ bụ GTK ...
Ndị na-egwu egwu enwere otu nde. Ọ bụrụ na ọ ga-abụ QT, m ga-aga maka Tomahawk ma ọ bụ YaRock. Ha nwere emezighị emezi ha, mana ha mara ezigbo mma.
Gbalịa Cantata, zuru oke ma na-emefu nnukwu ego karịa Amarok ma ọ bụ Clementine.
kedu ihe GTK ga-abụ?
Zaghachi ka ị gaa migurl
Ezigbo isiokwu. Ajuju, gini ga abu ihe a choro maka PC?
Nke ahụ dịgasị ọtụtụ, KDE nwere ike ịgba ọsọ na Netbook yana 1GB RAM yana Atom dị ka nhazi. Yabụ na ọ dabere na ngwaike ị nwere.
Ọhụrụ KDE interface na-aga nke ọma na Nitrux (KDE) + Ydị [: ZERO] icon suite. Ọ dị njọ na ha anaghị enwere onwe ha.
Agbalịrị m kde na dị ka ihe ole na ole na ndụ, ejiri m n'aka nke a: Achọghị m KDE ma ọlị.
dị ka kde, anaghị m amasị gnome ma. Abụ m pro-XFCE. Ma obu ihe uto.
elav M onwe m na-amasị imewe nke Plasma 5. Otú ọ dị, n'ihi na nke kwụsie ike nke. Oge m nọrọ na KDE 4 na-aga ogologo oge… Ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala ruo mgbe mbipụta nke Plasma 5 ga-apụta.
N'oge a enwere m mmetụta dị mma na KDE 4. Yabụ na anaghị m agba ọsọ iji nwaa Plasma 5.
Ọ bụ ezie na ịnwale ya. Echere m na m ga-arụnye ihe ọhụrụ Linux Mint na KDE na draịvụ ike nke abụọ. Yabụ ọ bụrụ na ihe aga ada na Plasma 5 agaghị m atụfu ihe ọ bụla 🙂
Echere m otu ihe ahụ. Echere m na m ga-arapara na KDE4 nwa oge, mana m ka nwere ike ịnwale Plasma5 na PC ọzọ. 😉
Abụ m onye ọrụ oke, mana azụrụ m kọmputa 3gb Intel i4, kedu ka KDE ga-esi jiri igwe a na-eme ihe?
Daalụ maka azịza gị 🙂
Dị ka silk enyi m
Enwere m ya na Intel Core i5 ma ọ na-agba nnukwu 🙂
Agbalịrị m ya na Fedora ma ahụrụ m ya ka na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ:
Ọ na-enweghị desktọọpụ oyiyi na ọ dịghị ụzọ na-etinye ha (dịghị obere igbe nke ndị) Nke a adịghị mma ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji merie omenala ọrụ.
Ngwa ndị dị mkpa na-efu na Qt5, dịka Dolphin, konqueror, wdg. Enweghị m mmasị na ngwakọ spam nwere ike ịmalite n'etiti kof 4 na 5
Klọ ọrụ KDE ka na-efu ọtụtụ nhazi modulu. Enweghị ike ịhazi ngwa nbipute, dịka ọmụmaatụ.
Enweghi ike iwelata ngwa na ogwe ngosi.
Enweghi otutu isiokwu, obu ezie na nke a bu obere nsogbu.
Ka o sina dị, m na-agba ọsọ KDE4 ọdịnala m, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịtọ ya na ndabara, enwere m olileanya na ị ga-edozi nsogbu ndị a ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala hapụ nhọrọ nke iji KDE4.
Nke a bụ ahụmịhe m naanị na KDE5 na Fedora. Ma eleghị anya, na ndị ọzọ na distros ọ bụ dị iche iche, ma n'ihi na ọtụtụ akụkụ m na-echeghị na ọ bụ kwụsịrị akara.
lucas nwa dijo
Eziokwu nke enwere ike inye site na mmepe sọftụwia na - akwụghị ụgwọ. Ọ bụ ezie na n'ihe gbasara ọnọdụ eserese…. M gaara ekele na gnome na kde na-eche ihe dị ka windo (ọ bụrụ na nke ahụ ga-ekwe omume). Ugbu a 1 afọ gara aga m na-eji xfce4. Nke mbu m họọrọ ya bụ na PC m na-adị kwa ụbọchị bụ obere akụ, mana m gara n'ihu na-ahọrọ ya n'ihi na ọ bụ ntọala kwụsiri ike ma kwụsie ike, dịka ọ dị na Windows XP. Ekwenyere m, na ọ bụghị naanị site na ahụmịhe nke m, na ndị ọrụ GNU / Linux (ọ bụghị ha niile, mana opekata mpe ọtụtụ) achọghị ịgagharị kwa afọ abụọ ọ bụla na-achọ ma ụlọ ọrụ ọrụ ọ na-egosi ihe dị anyị mkpa ma ọ bụ bọtịnụ ndị dị ebe a echi dị n'ofe ahụ, maọbụ ọ bụrụ na ogwe njikwa taa bụ otu ụzọ na echi ọzọ. Plasma (kde 2) dị mma, ee. Ọ dị ka mma, ee. Ma anyị na bọọlụ jupụtara na n'ihi «ihe ngosipụta nke ngosipụta» na desktọọpụ na notebbok adịghị mkpa, ihe niile na-agbanwe, na-agbanwe, ọ dịghị ka ọ gbanwee ma too.
Echere m na ọ dị mma na ngwa ahụ na-enweta ọsọ na ndị ọkwọ ụgbọ ala na-arụ ọrụ nke ọma ma dị mma karịa ọsọ ọsọ na kernel na ihe ndị a niile nwere otu akụ ahụ dị na mbụ. Ha bụ ihe ịtụnanya nke sọftụwia na-akwụghị ụgwọ .. mana biko !! egbula na gburugburu eserese.
Echere m na m na-ekwuchitere ọtụtụ. Ekele mmadụ.
Zaghachi lucas ojii
Dj ebibi dijo
Ezigbo isiokwu! Eziokwu nke dị n'elu, ọ mara ezigbo mma. Obi erughị ala m banyere ụdị ndị Ubuntu kachasị ọhụrụ, abụkarị maka na ha na-achọ oke ngwaike. Echere m na nke a agaghị egosipụta kpọmkwem site na ìhè ...
Zaghachi Dj Naufrago
Ndewo, anọ m na-anwa n'ọnwa gara aga ọtụtụ distros masịrị m Linux Mint 17.1 ọtụtụ, naanị ihe dị na cinnamon anaghị amasị m, agara m na fedora 21 mana enwere ihe na-ekweghị ka m nwee obi ụtọ, ugbu a, m gbalịrị kubuntu 15.04 na enwere m mmasị na ya bụ desktọọpụ nke nwere ihe niile, ihe ịchọ mma na-akpachapụrụ anya ma nwee nghọta Dolphin dị ka ihe dị egwu nye m enwere ihe niile m chọrọ n'aka, naanị ihe na-arụghị ọrụ nke ọma maka m bụ njikọta na droopbox na kMenu ebe o dere dee ka achoro m dere Terminal ma obu konsole na odighi ihe obula na acho anya m nwere olile anya na ha mezie ya (amaghim ma nke a diri onye ozo), mana ma echere m na ebe a ka m no KDE5 o juru m anya site na mbido ọgwụgwụ
Amaghị m ihe ha mere mana m na-emelite na Arch ma ọ na-agba ọsọ nke ukwuu, na desktọọpụ n'ozuzu ha na-eme ngwa ngwa, ikekwe yana obere lag (anabata), ugbu a lag adịla kpamkpam.
Ọrụ magburu onwe ya site na otu KDE.
Anọ m na-anwale Kubuntu 15.04 ụbọchị ole na ole gara aga ma enwere m mmasị na ya, ekwere m na enwebeghị m mmasị na KDE karịa ihe ọ bụla maka ọdịdị ya, mana m ga-eme ka o doo anya na KDE nwere ngwa ndị magburu onwe ya dịka Dolphin, Okular, K3b ịkpọ ụfọdụ n'ime ha. Ọ bụ ezie na ọ na-erepịa RAM karịa nke Xubuntu, na PC ochie m (AMD64x2 nwere 4GB nke RAM yana kaadị NVIDIA agbakwunyere) ụdị a na-agba ọsọ nke ọma, ọrụ magburu onwe ya 🙂
Ogboko 027 dijo
Agbalịrị m ntinye dị ọcha nke 15.04, ma enwetaghị m kaadị eserese Nvidia GS7300. ihe ihere ...
Agbalịrị Kubuntu 15.04, KDE mara mma, mana enweghị ike ịrụ ọrụ na desktọọpụ ahụ, ọtụtụ mkpọka. Emechara m wepụ ya, laghachi na Kubuntu 14.10.
Zaghachi na Continum4
yiri windo 8 🙁
Ọ dị mma n'ihe gbasara eserese, arụmọrụ na mbido ọ na-aga nke ọma, naanị ihe m na-ahụ ọdịda bụ na a ga-ahazigharị ụda ahụ oge ọ bụla m banyere sistem na amaghị m ma ọ bụrụ na enwere ike gbanwee faịlụ ọ bụla ka m wee ghara ' Ekwesiri ime nke ahụ oge ọ bụla m gbanye ma ọ bụ malitegharịa pc ahụ. Efere m nwere ihe 2.5Ghz dual core amd athlon processor, 4GB RAM, kaadị ụda olu agbakwunyere na kaadị vidiyo 1Gb Ati.
Zaghachi julio 74
Ndewo, achọrọ m ikwupụta echiche m dị ala, ọ bụ ezie na ekwenyere m ọtụtụ ihe na onye edemede nke isiokwu ahụ, mụ onwe m agaghị atụ aro plasma 5, mana m ji obi m kwenye na ọ dị mkpa iji dozie nsogbu ụfọdụ nwere ike ịbụ ikiri ụkwụ ya dị iche iche gburugburu desktọọpụ.
Emeela m ụfọdụ ule na Kubuntu 15.04, nke a ka arụnyere na laptọọpụ ika HP, Nlereanya 420, yana 2GB RAM ma ana m ahụ ihe ndị a:
Ọsọ: Ọ bụ ezie na laptọọpụ nyocha ahụ pere mpe, achọpụtara m na Kubuntu na-arụ ọrụ ọsịsọ n'ihe metụtara nwanne ya nwoke Ubuntu 15.04 arụnyere n'otu kọmputa ahụ.
Design: Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ otu n'ime atụmatụ ndị mara mma nke m hụgoro ma ọ dịkarịa ala, ahụla m, dị ka onye edemede dere, a hụrụ na ndị amamihe nke KDE nwere nnukwu nchegbu gbasara nke a, ebe a hụrụ na ọ dị ọcha. na desktọọpụ aesthetic.
Office automation: dị ka ọ dị na mbụ LibreOffice, ọ nweghị ihe ọ bụla ị ga-ekwu ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ na-enweghị ihe ịga nke ọma iji nwee ike karịa Office of Microrobo, n'echiche m ọ bụ usoro kachasị mma.
Onye njikwa onwe gị: onweghi ihe ị ga-ekwu Kontact m na-eche nke kachasị mma n'ọhịa ya, ma nwee obi ume ala mmemme a arụgo ọrụ bara uru karịa Outlook ma ọ bụ Thunderbird n'onwe ya….
1.- Ọ na-efu ntakịrị iji hazie ya ebe ọ bụ na ndabara ọ na-abịa na isiokwu Brize, nke ka njọ bụ isi, ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe dị mkpa na ọ nwere ike iwe.
2.- Amarok, n'onwe m enwebeghị mmasị na ya ebe ọ bụ na achọtara m ya nke ukwuu na ọ bụrụ na anyị ga-ekweta na ọ bụ nke kachasị kwụsie ike ...
3. - Ihe ndekọ kachasị nke niile bụ na ọbụlagodi Kubuntu 15.04, na-enwe nnukwu nsogbu na eserese ahụ, ebe ọ bụ na ihe ngebichi na-enyo enyo, ịchọpụta na ụfọdụ blọọgụ bụ isi ọwụwa maka ndị Kubuntu ndị na-enwebeghị ike idozi nsogbu a nwere ike ịbụ Achilles ikiri ụkwụ nke Plasma 5… o doro anya na Fedora 22 mere ụfọdụ mgbanwe wee chọta ntakịrị ihe ngwọta maka nsogbu a….
Na nkenke, echere m na Plasma 5 ga-enye ọtụtụ ihe iji kwuo maka mana n'ime ọnwa ole na ole ma ọ bụ opekata mpe mgbe Kubuntu 16.04 pụtara (ọ bụrụ na ọ pụta), n'ihi na ikekwe n'otu n'ime ndị ọ na-apụ kpamkpam Ubuntu maka ụbọchị ahụ, onye ma ...
Na njedebe anyị nwere ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ n'efu na-enye anyị ohere ka anyị ghara iji Robosoft 7 ma ọ bụ Robosoft 10 maka nke m, ọ masịrị m ichere ruo mgbe Kubuntu kwadoro na plasma 5 ...
Nkọwa: echiche m sitere n'aka onye nwere 0 ọmụma sayensị kọmputa, abụ m naanị onye ọrụ na anụ ọhịa….
Enwere m ike ikwu na Windows na-amịkọrọ !!!!
Ekele m unu niile !!!
N'ikpeazụ, mmadụ emeela ihe omume ụlọ n'ụlọ na m na-agbakwunye na ha nwere nsogbu na-amata mmepụta ọdịyo dị n'ihu, maka anyị ndị nwere PC desktọọpụ ma jiri ekweisi jikọọ na jacks n'ihu ọ dị mkpa, ugbu a ma ọ bụrụ na anyị hazie ha site na kmix na Ọ na-amata ma nhazi ahụ efunahụ mgbe ịmalitegharịrị kọmputa ahụ, nchapu ọkụ na ihuenyo na-emekarị ma na-agwụ ike ma na-eme karịa ihe ọ bụla mgbe ị na-ekiri ihe nkiri ma ọ bụ na-ege egwu na ọtụtụ windo mepere ma ihe ọzọ bụ na ihe emeela m ugbua na oge 2 ma na ihuenyo ahụ dị oji ma dịkwa ka desktọọpụ desktọọpụ ma ọ bụ njikwa ọrụ mana ọ naghị apụta ma ọ bụ ka ihe ọ bụla na-agba ọsọ na-eme ka m ochie KUBUNTU 14.10 siri ike ebe m na-ekwu okwu a. ugbu a. Kọmputa m nwere AMD ATHLON 2.5 × 2 Ghz x64 4 Gb RAM DD 1Tb processor, Radeon 4550 1GB RAM graphics
Zaghachi julio mejia
Dịka m kwuru ihe dị ka narị ozi ise gara aga, hahaha, edoziri m nsogbu ahụ na-egbuke egbuke site na ịwụnye ọkwọ ụgbọ ala AMD kwụsiri ike maka kaadị eserese m.
Ndewo Enyi sitere na Linux: M wunye Kubuntu 15.04. Otu n'ime ihe ngwangwa youtube gị nke SMplayer anaghị arụ ọrụ maka m. M na-agwa gị, m na-arụ ọrụ taabụ na SMplayer, na nhọrọ «chọọ vidiyo na youtube, igbe okwu gosipụtara na-ekwu, sị: Mperi: Enweghị ike ijikọ na sava youtube. Nwere ike inyere m aka idozi nsogbu a? M ga-enwe ekele maka ya nke ukwuu. Enwere m azịza gị.
Zaghachi Eliud Gómez
Nye GIMP lee Photoshop
6 atụmatụ gị music player kwesịrị inwe